Wararka - Sidee ayey tahay in loo ilaaliyo qalabka mashiinka CNC maalin kasta?
Dayactirka maalinlaha ah ee mashiinada CNC waxaa kamid ah: kormeer maalinle ah, kormeer todobaadle ah, kormeer bille ah, kormeer seddex biloodle ah, iyo kormeer sanadle ah. Dayactirka kahortaga ee qalabka mashiinka CNC waa sida soo socota:
1. Kormeer maalinle ah oo ku saabsan qalabka mashiinka CNC ee mashiinka CNC
Mashruucyadeeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah nidaamka haydarooliga, nidaamka saliidda dunmiiqa dunidda, nidaamka hagaajinta saliidda tareenka, nidaamka qaboojinta, iyo nidaamka pneumatic. Kormeerka maalinlaha ah wuxuu ku saleysan yahay xaaladaha caadiga ah ee nidaam kasta oo la tijaabiyo. Tusaale ahaan, marka nidaamka tijaabinta dunmiiqa dunmiiqa la tijaabiyo, nalka korontada waa inuu ahaadaa saliida saliiduna waa inay si caadi ah u shaqeysaa. Haddii nalka korontada uu dansan yahay, dunmiiqa waa in lagu hayaa xaalad istaag ah lana xiriir injineerka makaanikada. Samee dayactirka.
2. Kormeerka toddobaadlaha ah ee mashiinnada CNC ee qalabka mashiinka CNC
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qaybaha qalabka mashiinka iyo nidaamka saliidda dunmiiqa, oo ay tahay in si sax ah loo hubiyo toddobaad kasta, gaar ahaan qaybaha qalabka mashiinka si looga saaro feylasha birta loona nadiifiyo qashinka dibadda.
3. Kormeerka billaha ah ee mashiinada CNC ee qalabka mashiinka CNC
Badanaa hubi korontada iyo qalajiyaha hawada. Awoodda korantada ayaa lagu qiimeeyaa 180V-220V xaaladaha caadiga ah, iyo inta jeer ee ay tahay 50Hz. Haddii ay jirto wax aan caadi ahayn, waa in la cabbiraa oo la hagaajiyaa. Qalajiyaha hawadu waa in la kala qaadaa bishiiba mar, ka dibna la nadiifiyaa oo la soo ururiyaa.
4. Kormeer saddex-biloodle ah oo ku saabsan qalabka mashiinka CNC ee mashiinada CNC
Kormeerka seddexdii biloodba mar waa in laga sameeyaa inta badan saddexda qaybood ee sariirta mashiinka, nidaamka haydarka, iyo nidaamka saliidda dunmiiqa. Tusaale ahaan, marka la baarayo sariirta mashiinka, waxay inta badan kuxirantahay in saxnaanta qalabka mashiinka iyo heerka qalabka mashiinka ay buuxinayaan shuruudaha kujira buuga. Haddii ay dhibaato jirto, waa inaad isla markiiba la xiriirtaa injineerka mashiinka. Markaad kormeeraysid nidaamka haydarooliga iyo nidaamka saliidda dunmidda dunmiiqa, haddii ay wax dhibaato ah jiraan, ku beddel saliidaha cusub ee 6oL iyo 20L, oo ​​nadiifi.
5. Semi-sanadlaha kormeerka qalabka mashiinka CNC ee mashiinada CNC
Sannad badhkiis ka dib, waa in la hubiyaa nidaamka haydarka, nidaamka saliidda dunmidda, iyo X-dhidibka qalabka mashiinka. Haddii wax khaldamaan, saliida waa in la beddelaa ka dibna la nadiifiyaa. Ka dib markii si buuxda loo barto loona barto aqoonta dayactirka kahortaga, waxaa lagama maarmaan ah in si qoto dheer loo fahmo loona hanto sababaha iyo daaweynta dhacdooyinka aan caadiga ahayn ee nidaamka haydarka. Haddii mashiinka saliida uusan saliid ku durin, cadaadiska waa mid aan caadi aheyn, ama buuq ayaa jira, waa in la dayactiraa oo wax laga qabtaa waqtiga.